Abavelisi beemfashini zeeFashthi, abaXhasi-abaMzi-mveliso baseTshayina iFashtar Fisher
Amasokisi abantu boMqhaphu-njengaBhovu, amaFashoni amaShemets amaFuthi amaSanti amaNqaku aThengisayo Amadoda athengisayo
Udibene nomdlalo wakho kunye nomyili wesokisi njengabazobi. Isitshixo kunye nomphetho werabha sibonisa uyilo olusongelweyo, imizobo, kunye nesipili kunye nokukhanya kwe-EVA. Ulungelelwaniso olwenziwe ngendlela ethandabuzekayo. Inyawo enomtyibilizi yingubo yemini yonke. Inqaku loLwazi lweMveliso Inombolo: 5026 Igama lemveliso: uyilo olutsha oludumileyo iilenti eziphezulu zamadoda Izinto eziphezulu: iimpahla ezilukiweyo, irabha yepakethi, ukubamba izinto ze-Insole: mesh Outsole impahla: ilight eva sole Uhlobo: flyknit sock-like shoe shoe ...
I-China Abavelisi be-OEM abaqhelekileyo izicathulo zeSanti, ama-Designers e-Brands ama-China I-China Casual izicathulo zefanitshala
Umqeqeshi unika amandla okunyusa kule mihla enokubakho! Ezi fashoni zibambe ngamehlo zenziwe ngombala wesikhumba, kwaye zisetwa kwisitayile sokwakheka sokubumba kuphela. Ukujikeleza uzwane. Isitayile sokuphakama. Iling yendwangu. Inyawo enqwelwayo. Iipilonon ezilula. Inqaku loLwazi lweMveliso Inombolo: 5012 Igama lomveliso: Umenzi waseTshayina ubonelela ngomyili oyiliweyo kunye nabathengisi / abaqeqeshi bezinto eziphezulu: i-suede, i-mesh yelaphu, izinto zokwenziwa ze-pu Lining izinto: Ilaphu le-Insole: i-mesh e-Outsole ma ...
I-Spring 2020 izihlangu ezitsha zabesifazana ezinombala ohambelana nobuntu befashoni yababhinqileyo
Yimani kwi-Sneaker enemibala yenzwane ejikelezileyo, indawo eyenziwe phezulu yomntu kunye nemibala enemibala. I-sneaker yefashoni yokuvalwa kweleyiti yendabuko. Izambatho zelaphu ezithambileyo kunye ne-cushioned footbed. Icushioning eva midsole, ihlala irabha eqinile. Inqaku loLwazi lweMveliso Inombolo: 5024 Igama leMveliso: ukuthengisa okuphezulu kushushu okutsha okutsha okubhityileyo Izinto eziphezulu: isede yesikhumba, i-mesh yengubo, impahla ye-Lining: i-mesh ethambileyo I-insole yezinto ezikhoyo: i-mesh yezinto zeMidsole: I-Cushioning i-EVA Outsole yezinto ezikhoyo: irhasi eqinileyo Isini: m. ..
Ababhinqileyo ababhinqileyo ababhinqileyo ababhinqileyo ababhinqileyo ababhinqileyo abangama-2020 abafikayo ababhinqileyo bohlobo lwamafashoni ababhinqileyo
Imigangatho elungiselelwe abanye oontanga bakho ngezi ziqhulotsha. I-Nylon kunye ne-suede ephezulu kwi-silhouette enemibala kunye nemidlalo. Ukuvalwa kweLace-fit ukuze ikhuseleke. Ikhola edityanisiweyo kunye nolwimi. Imigca yokuphefumla enokuphefumla. IPhylon ephumayo eguqukayo. Inqaku loLwazi lweMveliso Inombolo: 5019 Igama lemveliso: Ukufika izihlangu zezemidlalo zingaqhelekanga; ubukhulu buxhonywe ngezinto eziphezulu zepasile: isheede, isisi esinokuphefumla, izinto zokwenziwa: Izinto zentsimbi ye-spandex: mesh Outsole izinto ezikhoyo: Uhlobo oluqinileyo lwerhasi eyomeleleyo .
Umgangatho oPhezulu weMidlalo oMnyama oMnyama oMnyama oMnyama wabaNtu abaqhelekileyo izicathulo zeFashthi zeMens
Lawula imbonakalo yakho yefashoni kwisitayile kunye ne-sporty sneaker. I-Chunky sneaker ifaka i-suede kunye ne-mesh ephezulu. Ukuvalwa kwendabuko ngentambo kunye nentambo evaliweyo evaliweyo yokugcina unyawo lonke kwindawo yokuhamba nge-Round-toe silhouette. I-Spandex mesh lining kunye ne-insole. Ibambeke kancinci ngonyawo. I-PHYLON eqingqiweyo ye-TYU ngaphandle kwe-TPU ebonakalayo eplagi. Inqaku loLwazi lweMveliso Inombolo: 5025 Igama lomkhiqizo: i-fashion sneakers ene-chunky yedwa yamadoda kunye nabasetyhini Izinto eziphezulu: umgangatho ophezulu wokumangalela ...